Dawladda Maraykanka ayaa cambaareysay afduub dhawaan ka dhacay xafaadda Wadajir ee Galkacyo. – Radio Daljir
Dawladda Maraykanka ayaa cambaareysay afduub dhawaan ka dhacay xafaadda Wadajir ee Galkacyo.
Washington, Oct, 27 – Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay inay cambaareynayso adbuud dhawaan ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo oo ay ka tilayaan maamulka Gal-mudug ee Koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaalya.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa isagoo jooga magaalada Washington ee xarunta dalkaasi sheegay in falkaasi ahaa mid fool xun oo loo geystay samafalayaal aan waxba galabsan, wuxuuna maamulka deegaankaasi ka codsaday inay arrintaasi si degdeg ah wax uga qabtaan.
Afduubkan oo dhacay maalintii Talaadada ee toddobaadkan ayaa waxaa loo geystay laba qof oo u shaqeynayey hay?adda DDG oo ka shaqaysa la dagaallanka waxyaabaha qarxa, waxayna u kale dhasheen labadaasi qof dalalka Mareykanka iyo Danmark. Waxaana afduubkaasi fuliyey malleeshiyaad hubaysan oo la sheegey inay ula baxsadeen Koonfurta gobolkaasi.
Maamulka Gal-mudug ayaa sheegay in falkaasi ay fuliyeen koox burcadbadeed ah ayna ku hawllan yihiin sidii dadkaasi loo siideyn lahaa, balse burcadda ayaan looga baran inay gorgortan ka galaan dadka ay afduubaan, waxaan ka ahayn inay helaan lagacta ay dadka madaxooda dul dhigaan haddii aan awood loo sheegan.
Maraykanka ayaa sannad-kii 2008-dii xoog ku soo furtay kabtan dalkaasi u dhashay ka dib markii uu laayey kooxdii afduubka u haysatay. Sannadkan horraantiisiina burcadbadeed Soomaali ah ayaa dilay afar dalxiisayaal Maraykan ah oo ay ka soo afduubeen meel boqoaal mile u jirta xeebaha Soomaaliya ka dib markii sida la sheegay ciidamada Maraykanku isku dayeen inay la haystayaashaasi xoog ku furtaan, balse ciidamada Maraykanka ayaa dilay qaar ka mid ah burcaddaasi qaarna maxaabiis ahaan u qabtay waxaana lagu maxkamadeeyey dalkaasi oo ay hadda ku xiran yihiin.
Dawladda Mareykanka oo aan looga baran inay la xaajooto burcadda ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda inay xoog isticmaali doonto sidii lagu yaqaannay iyo aqbali doonto dalabka burcadbadeedda ee ah in lacag madaxfurasho ah la siiyo.